Otu esi etinye VirtualBox na Linux Mint 20 - LinuxCapable
Otu esi etinye VirtualBox na Linux Mint 20
Tuesday, October 12, 2021 Thursday, August 19, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa VirtualBox
Otu esi eji VirtualBox
Otu esi eweghachi VirtualBox
Tinye & Mepụta VM ọhụrụ
Virtualbox bụ hypervisor na-emepe emepe maka x86 na x86-64, nke ụlọ ọrụ Oracle na-etolite. Akụrụngwa ahụ na-elekwasị anya ndị ọrụ na-achọ ịmepụta gburugburu mebere maka sava na desktọpụ nke na-enye ndị ọrụ na ndị nchịkwa ohere ịme ọtụtụ sistemụ ndị ọbịa na otu kọmputa maka ụzọ nnwale ma ọ bụ iji mmepụta. Enwere ike itinye VirtualBox na Windows, macOS, Linux, Solaris na OpenSolaris.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi eme wụnye VirtualBox na sistemụ arụmọrụ Mint Linux gị yana imepụta igwe mebere ọhụrụ site na ọkọ.
OS akwadoro: Linux Mint 20 ma ọ bụ karịa.
Melite gi Mint Linux Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Ọ bụrụ na ịtọbeghị akaụntụ onye ọrụ sudo ma ọ ga-amasị gị, gaa na nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Linux Mint.
Nzọụkwụ mbụ na ịwụnye VirtualBox kacha ọhụrụ bụ nke mbụ ịgbakwunye igodo GPG:
Ị ga-awụlikwa nzọụkwụ a, ma ọ bụ gị echichi ga-ata ụta.
Nzọụkwụ ọzọ ozugbo igodo GPG a na-ebubata bụ ịgbakwunye ebe nchekwa dị ka ndị a:
Mgbe nhazi ahụ zuru oke, mebie iwu nwụnye iji wụnye VirtualBox:
sudo apt update && sudo apt install -y virtualbox-6.1
Ọmụmaatụ nke ndabere arụnyere na VirtualBox:
Iji gosi ma arụnyere VirtualBox nke ọma, lelee ọkwa dị ugbu a dị ka ndị a:
Iji malite VirtualBox, ị nwere nhọrọ abụọ. Nke mbụ bụ iji iwu njedebe:
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọrụ na desktọpụ ga-eji NchNhr > nchịkwa > Oracle VM Virtualbox.
Imepụta na hazie VM ọhụrụ na VirtualBox bụ usoro kwụ ọtọ dị ka ndị a. Nkuzi a ga-emepụta VM na profaịlụ Linux maka imepụta Windows 10 VM.
Kwụpụ 1. Ozugbo VirtualBox mepere, pịa bọtịnụ ọhụrụ dị ka n'okpuru:
Kwụpụ 2. Maka nkuzi a, ekwuru na nhọrọ VM ga-abụ Windows 10. Kpọọ VM gị, wee pịa Ụdị Windows 10 ma ọ bụrụ na ahọpụtabeghị gị ozugbo.
Ntụnye, ọ bụrụ na ị kpọọ VM sistemụ arụmọrụ, ị wụnye ya ga-ahọrọra gị ụdịrị ahụ ozugbo.
pịa Ọzọ > bọtịnụ aga n'ihu.
Kwụpụ 3. Window na-esonụ ị ga-ahụ bụ họrọ Ebe nchekwa (RAM) nhọrọ. Ihe ndabara bụ 1024 MB; Agbanyeghị, maka ọtụtụ sistemụ, ị ga-achọ ịbawanye nke a. Ndụmọdụ dị mma bụ ileba anya na nkọwapụta min wee chọpụta oke ebe nchekwa VM OS gị ga-achọ ma ọ bụ mụbaa n'akụkụ dị mma.
Dị ka egosiri n'okpuru, igwe nkuzi nkuzi mụbara oke ya na 6.5GB.
Ozugbo emere, pịa Ọzọ > bọtịnụ.
Kwụpụ 4. Mepụta ma ọ bụ jiri ntọala draịvụ ike dị adị. Ọtụtụ ndị ọrụ ga-adịkarị Mepụta diski ike mebere ugbu a nhọrọ mgbe ị na-emepụta VM ọhụrụ.
Họrọ nhọrọ a wee pịa Mepụta bọtịnụ.
Kwụpụ 5. Mgbe ị na-ahọrọ usoro nkesa nchekwa mebere, VDI (Onyonyo diski VirtualBox) akwadoro.
Pịa na Ọzọ> bọtịnụ ga n'ihu.
Kwụpụ 6. Ekekọrịtara nke ọma mgbe ị na-arụ igwe ndị ọbịa maka ịrụ ọrụ kacha mma na oke diski.
Kwụpụ 7. Họrọ ebe faịlụ ahụ ma ọ bụrụ na ndabara adịghị mma maka gị. N'ikpeazụ, tọọ oge nke diski ike mebere.
Ozugbo ahaziri, pịa na Mepụta bọtịnụ imecha.
Kwụpụ 8. Ị ga-abịa ugbu a na nyocha nke igwe mebere nke ị mebere ugbu a. Ị nwere ike gbanwee ntọala nke VM gị na nyocha a ozugbo na n'ọdịnihu. Mara, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ntọala, a ga-emechi igwe mebere nke ukwuu.
Iji malite nrụnye Windows 10, pịa bọtịnụ Malite bọtịnụ dị ka n'okpuru:
Kwụpụ 9. Ihuenyo mbụ ga-apụta mgbe ịmalite VM gị maka oge mbụ, nke ga-akpali gị ịhọrọ ISO gị dị ka diski mmalite.
Pịa na akara ngosi nchekwa dị ka ihe atụ n'okpuru.
Pịa na Tinye + bọtịnụ n'akụkụ aka ekpe dị n'okpuru:
Kwụpụ 10. Ugbu a chọta akwụkwọ ndekọ na Faịlụ ISO, họrọ ya wee pịa Mepee bọtịnụ:
Kwụpụ 12. Pịa na nke agbakwunyere ọhụrụ ISO nhọrọ, na nke a nwere ike were nke abụọ ma ọ bụ atọ iji mekọrịta na ndekọ.
Ozugbo ịhọrọ ISO nhọrọ nwụnye, pịa Họrọ bọtịnụ.
Kwụpụ 13. Na ikpeazụ nzọụkwụ, ị nwere ike ịhụ Faịlụ ISO ugbu a na mmalite diski nhọrọ iji wụnye.
Pịa na Malite bọtịnụ iji wụnye gị VM OS usoro.
Nke a ga-amalite usoro ịwụnye Windows 10 ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ị họọrọ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye VirtualBox ozugbo site na ebe nchekwa isi iyi iji nweta mmelite na njirimara kachasị ọhụrụ n'ọdịniihu, yana ihe atụ bụ isi nke ịmepụta VM site na iji VirtualBox.
N'ozuzu, n'ime ọtụtụ ngwa igwe mebere igwe dị na ahịa, VirtualBox bụ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị elu na-enye nhọrọ dị mma nke nnabata na ndị ahịa dị ka Windows site na XP gaa n'ihu, ọkwa Linux ọ bụla 2.4 ma ọ bụ ka mma, Windows NT, Server 2003, Solaris. , OpenSolaris, na ọbụna OpenBSD Unix.
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux Mail igodo
Otu esi etinye Ionic Framework na Debian 11
Otu esi etinye VLC Media Player na Fedora Linux